အပြေးမတော်တလှမ်း Racing | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » အပြေးမတော်တလှမ်း Racing
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 19, 2012 in U.S. News | 8 comments
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလောရီဒါပြည်နယ် ခရိုင်တရားရုံးသည် နောက်ကျောထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြင့် အလုပ်သမား သက်သာခံစားဂွင့် ရယူထားသူ အစိုးရစာတိုက် အလုပ်သမားတဦးအား ဘော့စတွန်မာရသွန် အပါအဝင် ခရီးရှည်အပြေးပြိုင်ပွဲပေါင်း ရှစ်ဆယ်ကျော် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားသီဂို တွေ့ရှိယသဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံစားခွင့် လိမ်ညာအသုံးချမှု အပြစ်ရှိဂျောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သီ။ :mad:
Myers အား (၅၅နှစ်) အချက်အလက် လိမ်ညာမှုဖြင့်လည်း အပြစ်ရှိဂျောင်း ဆုံးဖြတ်ထားပြီး အများဆုံး ၁၅နှစ် ထောင်ဒဏ် ကျခံဖွယ်ရာရှိသီ။ ဂျူလိုင်လ ၂၅ရက်နေ့တွင် စီရင်ဂျက်ချရန် စီစဉ်ထားသီ။ ကျောနောက်ပိုင်း နာကျင်မှုကြောင့် စာပို့ဂျင်း မလုပ်နိုင်ဒေါ့ဂျောင်း မေလ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် တင်ပြအရေးဆိုဂဲ့သဖြင့် သူမအား စာသယ်ပို့အလုပ်မှ ပိုမိုသက်သာသော တာဝန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးဂဲ့ရသီ။
Myers တယောက် သုံးမျိုးစုံ ထရိုင်သလွန်အားဂစားနည်း အပါအဝင် အပြေးပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနေသော ဓာ့ပုံ၊ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းများ ပေါ်ထွက်လာဂဲ့သီ။ သူမ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားဂျောင်း အစကနဦး တင်ပြပြီးနောက် တိုးတက်လာသော သူမအပြေးစံချိန်သီ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုလျင်ဒေါ့ သဒင်းဂေါင်းပင်ဖြစ်သီ။
ပြီးဂဲ့သိ အောက်တိုဘာလဂလည်း လန်ဒန်မာရသွန် အနိုင်ရသူတဦး Rob Sloan အား အပြေးပြိုင်ပွဲ ခရီးစဉ် အစိတ်အပိုင်း အတော်များများဂို ဘတ်စ်ကားစီး လိမ်ညာဂဲ့မှုကြောင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ယသီ။ အံ့ဩဖို့ကောင်းဒါ ထိုသူ ယခုအပတ်အတွင်း၌ ဘတ်စ်ကား အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် အလုပ်ရသွားဂျင်းဖြစ်၏။:lol:
Postal employee on workers’ comp caught running Boston Marathon By Eric Pfeiffer
Last October,amarathon “winner” in London was disqualified after it was revealed he had cheated by takingapublic bus forasignificant portion of the race he was supposedly running. Amazingly, it was announced this week that the disqualified winner, Rob Sloan, recently tookajob working asabus engineer.
“The people I work with have all been very supportive and good company as well,” Sloan told The Sun.
ကျောရိုးပြန်ကောင်းအောင် …. အပြေးလေ့ကျင့်နေတာပါဆို ..
အူးလေးတို့ ခေတ်မီနိုင်ငံတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခကို လိမ်ပြီး ညာယူနေတဲ့လူတွေများကြီးနော်..
နိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံ ညာစားနေတာပေါ့..
ကျိုးရင်တော့ အမြန် ဆက်တာ တိုင်းရင်းဆေးပဲဆရာwindtalkerရေ့
မယုံရင် ကျိုးကြည့် ပါလား ဟာဟ
အားပေး ပြေးလွှားသွားပါသီ။အဲလေ မှားသွားလို့ 
အဲဒါတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲနော်။
Forest Gump ကတော့ ပြေးလိုက်တာမှလေ..
Run Forest, Run…… ဆိုတာနဲ့ ပြေးလိုက်တာ ခြေထောက်က
bridges တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီး ခြေထောက်ပြန်သန်သွားခဲ့တာတော့။
အစိုးရစာတိုက် အလုပ်သမားတဦးအား ဘော့စတွန်မာရသွန် အပါအဝင် ခရီးရှည်အပြေးပြိုင်ပွဲပေါင်း ရှစ်ဆယ်ကျော် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားသီဂို တွေ့ရှိယသဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံစားခွင့် လိမ်ညာအသုံးချမှု အပြစ်ရှိဂျောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သီ။
ဘာရယ်မဟုတ်..ဘော့စတွန်မာရတွန်ဆိုပြီးရှာလိုက်တာ.. အပေါ်ကကိုရင်ကြောင်ကြီးစာတက်လာလို့.. ဒီလူ.. တနှစ်လောက်ကတည်းက..ထင်ရှားဖြစ်မယ်သိတဲ့.. ဒိဗ္ဗစက္ကုရနေသလား.. တွေးမိလို့.. :harr:
ဘော့စတွန်မှာ မနက်၎နာရီကြီး.. အသည်းအသန်တွေအခု(အခု)ညဖြစ်နေလေရဲ့..
ဘော့စတွန်မာရသွန်ဗုံးခွဲသံသယ၀င်စရာဖြစ်တဲ့.. တယောက်ကိုဖမ်းမိပေမယ့်.. ဆေးရုံမှာသေတယ်လည်း သတင်းထဲလွှင့်သွားတယ်..